စာမေးပွဲဟူသည် . . . – Eleven Media Group
စာမေးပွဲဟူသည် . . .
Posted on June 2, 2018 June 3, 2018 by Eleven Media Group
စာမေးပွဲဟူသည် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Examination မှ လာသည်။ အကဲဖြတ်ရန်၊ အတည်ပြုရန်နှင့် အသိအမှတ်ပြုရန်တို့အတွက် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်၌ ယင်း Examination ဟူသည့် စကားလုံးအား ဘ၀၏ နေရာအမျိုးမျိုးတို့၌ သုံးစွဲသောကြောင့် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော စကားလုံးဟု ဆိုနိုင်သည်။ စာမေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာသုံးသပ်သူတို့မှာကား စကားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းဟူသည့် စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးမည်လား၊ ဖြုတ်ပယ် အစားထိုးမည်လား ဟူသည်ကိုသာ ဆွေးနွေးရန် လိုလားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များက စာမေးပွဲများသည် လူတစ်ဦး၏ အရည်အချင်းကို မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိဟု ထင်မြင်ချက် ပေးကြသည်။ လက်ရှိစာမေးပွဲစနစ်သည် (စာမေးပွဲနီးခါမှ) အတင်းအဓမ္မ စာတွန်းကျက်ခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ ခေါင်းထဲသို့ရိုက်သွင်းကာ သင်ကြားခြင်းတို့အပေါ်၌ အခြေခံလျက် အရည်အချင်းတိုးတက်ရေးထက် စာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းကောင်းဖြင့် အောင်မြင်ရေးကိုသာ ရှေးရှုသည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိ စာမေးပွဲစနစ်သည် ခိုးချခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားခြင်းကဲ့သို့သော မကောင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ရန်လည်း အားပေးသေးသည်ဟု ဆိုသည်။
စာမေးပွဲစနစ်အား ရှိကိုရှိရမည်ဟု အဆိုပြုကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိသည်။ စာမေးပွဲ မရှိဘဲ မည်ကဲ့သို့လုပ်မည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ ဘ၀ကိုယ်နှိုက်သည်ပင်လျှင် ကြီးမားလှသော စာမေးပွဲကြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသေးသည်။ အဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်း၊ ခြေလှမ်းတိုင်း ခြေလှမ်းတိုင်း၌ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကို ရင်ဆိုင်ရမည်သာဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဘ၀၏ စာမေးပွဲများအားလုံးကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းကို အောင်မြင်မှုဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ စာမေးပွဲများသည် လူတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ခံနိုင်ရည်၊ ဇွဲလုံ့လနှင့် အခြားကောင်းသော အရည်အသွေးများကို မြှင့်တင်ပေးသည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းတို့က စာမေးပွဲများသည် လိုအပ်သည်သာမက ကောင်းသောအရာများကို ပေးသည်ဟု ယူဆကြသည်။
လူတိုင်းသည် စာမေးပွဲများကို ကြောက်ခဲ့ဖူးသည်သာဖြစ်၏။ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ၊ စာမေးပွဲ စစ်ဆေးသူများနှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ အားလုံးတို့က စာမေးပွဲဟူသည်ကို ကျိန်စာဟု လည်းကောင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိစ္စကြီးဟုလည်းကောင်း တွေးကြပေလိမ့်မည်။ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် စိတ်ရောဂါအများစုသည် စာမေးပွဲများနှင့် အတင်းအဓမ္မ စာတွန်းကျက်ရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။
သို့သော်လည်း စံနှုန်းများသတ်မှတ်ထားရမှုနှင့် ဖြေဆိုသူများ၏ အရည်အချင်းကို အကဲဖြတ်ရမှုတို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများလည်း လမ်းလွဲသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။ သူတို့သည် စာမေးပွဲများကို ကြောက်ကြသောကြောင့် လေ့လာ ဆည်းပူး သင်ယူမှု ပြုလုပ်ကြခြင်းသာဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲ စနစ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက စကားလုံး တစ်လုံးမျှကိုပင် လေ့လာဆည်းပူးမှု ပြုလုပ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ စာမေးပွဲစနစ်အား ဖျက်သိမ်းရမည်မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်းသာမက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါ အကြီးအကျယ် အကျိုးရှိစေရေးကို ရှေးရှုသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက ရေးသားအပ်ပါသည်။
(ဇွန်လ ၃ ရက်ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်)
Posted in EditorialsTagged editorial
အစိုးရတစ်ရပ်နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှု
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော့မှူးမြို့နယ်ရှိ ကော့မှူးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် အစိုးရတစ်ရပ်ဆိုသည်မှာ အဂတိလိုက်စားသည်ဟု စွပ်စွဲမှုကင်းရုံသာမက အဂတိလိုက်စားကြောင်း ပြည်သူများက သံသယပင်မရှိရန် နေထိုင်ရမည်ဟု
မကျေနပ်ချက်နှင့် ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းခြင်း
၀န်ထမ်းများအကြား ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများ မဖြစ်ပေါ်ရန် ကာကွယ်ခြင်းတို့အား သိရှိခြင်းသည် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ်၌ လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ၀န်ထမ်းများနှင့် ပဋိပက္ခသည် မကျေမချမ်းဖြစ်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်ပြီး ကျေနပ်မှုမရှိသည့် ၀န်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်များကို အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်သာ …
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ၏ယုံကြည်မှုရရှိစေနိုင်သည်ဟု တရုတ်အစိုးရ အာဘော်သတင်းစာ Global Times ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဇွန်၁၄ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့
စီးပွားရေးစနစ်သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့်လူသားများအား အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိစေသော်လည်း ထိခိုက်စေမှုများလည်း များစွာရှိသည်။ စီးပွားရေးစနစ်၏ ကမ္ဘာကြီးနှင့် လူသားများအပေါ် ထိခိုက်စေသည့် အဓိကနည်းလမ်းငါးခုကို ယခုကဲ့သို့ တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု – နည်းပညာနှင့် အရင်းအမြစ်များက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတိုင်းအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ၊ သန့်ရှင်းသောရေနှင့်
ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားအပ်သော ငွေကြေးအကျပ်အတည်း
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အတိုင်းအတာများနှင့်ယှဉ်၍ ဒေါ်လာဈေးများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက အထွေထွေကျပ်တည်းမှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထူးစီးပွားရေးအကြံပေး ရှောင်တာနယ်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။ သြဂုတ် ၁၇ ရက်
ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်…
ဖိလစ်ပိုင်တွင် မြေပြိုမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်…
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ် 1MDB အရှုပ်တော်ပုံအတွက်…